(tonga teto avy amin'ny RAVOAHANGY-ANDRIANAVALONA Joseph)
Ravoahangy-Andrianavalona Joseph dia mpitari-tolona malagasy, niady tamin' ny fanjanahantany, anisan' ireo namorona ny antoko Vy Vato Sakelika (V.V.S.) sy Mouvement Démocratique de la Rénovation Malgache (M.D.R.M.)
1.3 Ny M.D.R.M sy ny raharaha 29 Martsa 1947
1.4 Ny niafarany
Teraka tao Fianarantsoa tamin' ny faha-28 Oktobra 1893. Zana-dRakotonavalona Joël sy Ramanantenasoa Rose (samy avy amin' ny karazana Andriamasinavalona). Nanaraka ny ambaratonga voalohany tamina sekoly samihafa tao Fianarantsoa. Rehefa izany, dia niakatra hanohy ny fianarany tao amin' ny sekoly Le Myre de Vilers Antananarivo ary afaka ho mpianatra mpitsabo tamin' ny taona 1912.
Ny taona 1913, dia isan' ireo namorona ny V.V.S ary nosamborina noho izany tamin' ny taona 1915.
Voaheloka hiasa an-terivozona mandra-pahafatiny ny faha-18 Febroary 1916 (fitsarana natao tao Andafiavaratra) ary nalefa sesitany tany Mayotte. Nohalefahana ho asa an-terivozona mandritra ny 15 taona izany saziny izany ary nofoanana mihitsy aza tamin' ny taona 1922. Niverina nanohy ny fiarany ho mpitsabo ary tafavoaka ho mpitsabo herintaona taty aoriana, ka rehefa mpitsabo, dia niditra tao amin' ny A.M.I ary notendrena hiasa tany Toliara hatramin' ny taona 1927. Rehefa tapitra ny fifanekena nataony tamin' ny fanjakana, dia lasa nakany Diégo "hiara-miasa" tamin-dRalaimongo, kanefa dia voarara tsy hahazo manao ny asan' ny mpitsabo tany amin' io toerana io.
Izy sy Dussac Paul, no niara-nanohy ny famoahana ny gazety L'Opinion, rehefa naiditra am-ponja Ralaimongo ny taona 1928, ka lafi-kevitra 2 lehibe no nitoloman'izy ireo tamin'izany, dia ny fanafoanana ny "indigénat" ary koa ny fanafoanana ny Lalàna naha-zanatany frantsay an' i Madagasikara tamin' ny faha-6 Aogositra 1896 mba ho fananganana ny fanjakan' i Madagasikara.
Hoy tamin'ny lahatsoratra navoakany tao amin' ny gazety L'Opinion ny faha-24 Septambra 1934: "Takianay hatrany ny Fahaleovantenan' i Madagasikara".
Niverina teto Antananarivo ny taona 1936 ary niara-namorona tamin-dRalaimongo sy Dussac Paul ny gazety La Nation Malgache sy ny Le Prolétariat malgache sy isan'ireo namorona ihany koa ny fihetsehana sendikaly voalohany. Ny taona 1939, teo am-piandohan'ny Ady lehibe faha-II, dia niato tsy nanao pôlitika, kanefa izany tsy nahasakana ny fanjakana tamin' izany fotoana (akaiky an' i Vichy) hanao fisavana matetika ny tokantranony. Voafidy ho mpanolotsainan' ny Tananan' Antananarivo ny taona 1945, kanefa, dia nofoanana izany, vokatr' ireo fanamelohana samihafa azony hatramin' ny taona 1916, saingy, na izany aza dia voafidy ho solombavabavambahoaka tao amin' ny Antenimiera mpamolavola tany Frantsa ny volana Novambra ary mbola voafidy hitana io toerana io ihany na tamin' ny volana Jona na tamin' ny voalana Novambra 1946.
Ny M.D.R.M sy ny raharaha 29 Martsa 1947Hanova
Ny taona 1946, dia isan' ireo niara-namorona ny antoko M.D.R.M. Voaheloka ho faty noho ny raharaha faha-29 Martsa 1947 araka ny Fitsarana natao teo Andafiavaratra, sazy izay nivadika ho fitanana mandra-pahafaty anaty faritra voaambina ny taona 1949, ka nahiboka tany Moaly (Kômôro) ary nafindra tany Calvi (Nosy Corse) avy eo. Nampanao "tsia" tamin' ny fitsapan-kevi-bahoaka natao ny faha-28 Septambra 1958. Rehefa tafaverina teto an-tanindrazana, dia voafidy ho solombavambahoan' Antananarivo ny 4 Septambra 1960.
Ny taona 1961, dia niditra ho mpikambana P.S.D ary voatendry ho ministra na minisi-panjakana hatramin' ny fotoana nahafatesany ny faha-21 Aogositra 1970, ary nalevina am-boninahitra sy nisaonan' i Madagasikara.
Ilaitangena (Feon' ny Merina lah. faha-163, 18 Jolay 1997)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ravoahangy-Andrianavalona_Joseph&oldid=1042913"
Dernière modification le 11 Janoary 2022, à 16:29
Voaova farany tamin'ny 11 Janoary 2022 amin'ny 16:29 ity pejy ity.